Wasiir Dhuxulow & Waxqabadka xukuumadda todobaadkii tegay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiir Dhuxulow & Waxqabadka xukuumadda todobaadkii tegay
A warsame 4 October 2014 4 October 2014
Mogadishu, 04 October 2014 – Wasiirka Warfaafinta, Mustafa Sheikh Ali Dhuhulow oo maanta warbaahinta la hadlayey ayaa siiyey warbixinta horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay. Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; maamul wanaaga, horumarka howlgalka Badweynta Hindiya, horumarka dhaqangelina nidaamka Federaalka, horumarka waxbarashada dalka, wadatashiga Hiigsiga Cusub (New Deal), iyo Arrimaha Abaaraha.
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey maamul wanaaga ayaa yiri “1dii October ayaa Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed uu kulan la qaatay Agaasimeyaasha Guud ee Wasaaradaha Dowladda. Ujeedada kulanka ayaa ahaa sidii loo dar-dargelin lahaa howlaha muhiimka ah ee Xukuumadda isla markaasna loo dhaqan gelin lahaa maamul wanaag keeni kara in si cad-cad oo furfuran la iskula xisaabtamo oo bulshada Soomaaliyeed loo fidiyo adeegyada bulshada. Dood dheer ka dib ayaa waxaa la isla gartay in la joogteeyo kulamada noocan oo kale ah, in hay’adaha dowladda ay yeeshaan wadashaqeyn joogta ah, in la sameeyo guddi si gaar ah u soo qiimeeya howlaha wasaaradaha. Bacdamaa la rajeynayo in 2016 ay qabsoomaan doorashooyin ayaa waxaa muhiim ah in wasaarad walba ay si cad uga soo dhalaasho howlaha loo igmaday. Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay inay muhiim tahay in waxqabad dhab ah lala yimaado oo Agaasimayaasha Guud loooga baahan yahay inay dhaqangeliyaan maamul wanaag.
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlaye horumarka howlgalka Badweynta Hindiya ayaa yiri “Howlgalka Badweynta Hindiya oo in muddo ahba u socday si wanaagsan ayaa waxaa Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed (XDS) iyagoo kaashanaya AMISOM ay 1dii October ay si rasmi ah ula wareegeen gacan ku haynta degmada Cadale iyo deegaanno kale, iyagoo sidoo kale 30kii September la wareegay deegaanka Raage Ceelle oo hoostaga Gobolka Shabeelaha Dhexe. Taliyaha guutada 12-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Jeneraal Maxamuud Maxamed Xasan “Qaafoow” ayaa sheegay in ciidamada XDS iyo kuwa AMISOM ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Cadale, halkaasi oo uu xusay inay iminka ka wadaan howlgallo amni xaqiijin ah. Jeneraal Qaafoow ayaa tilmaamay in ciidamada ay la kulmeen soo dhaweyn ay u sameeyeen shacabka halkaasi ku nool, waxaana uu intaa ku daray inay sii wadayaan howlgallada ay ku baacsanayaan maleeshiyada Al-Shabaab, isla markaana gacanta dowladda dib loogu soo celinayo deegaannada xeebta ku teedsan ee ay Shabaabku ku dhuumaaleysanayaan. Ciidamada ayaa maalmahaan waxa ay deegaanno badan oo ka tirsan Gobolka Shabeelaha Dhexe ka wadeen howlgallo ay kula wareegeen deegaanno badan oo ay horey ugu sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka dhaqangelinta nidaamka Federaalka ayaa yir “1dii October 2014 Xubno ka tirsan Gudiga Farsamada iyo Xildhibaan C/qaadir Cali Cumar ayaa waxaa ay gaareen magaalada Cadaado oo halkaas soo dhoweyn heer sare ah ay bulshada qeybaheeda kala duwan ugu sameeyeen. Ujeedada safarkooda ayaa aheyd inay u kuur galaan xaaladda deegaanada Galgadud iyo Mudug si ay bulshada ugala hadlayaan inay ka qeybqaataan dadaalka maamul u sameynta gobollada dhexe ee dalka. Xildhibaan C/qaadir Cali Cumar oo hoggaaminayey wafdiga ayaa ugu baaqay bulshada Mudug iyo Gal-gaduud dal iyo dibadba inay fursadaan ka miro dhaliyaan. Madaxwaynaha Maamul Goboleedka Ximan iyo Xeeb C/llaahi Cali Maxamed (Baarleex) oo munaasabadda soo xiray ayaa sheegay in imaanshaha xubnaha gudiga ay fududeyn doonto hawsha, waxaana uu sheegay in gudiga uu hawlihiisa u madax banaanyahay ayna ku saacidi doonaan waxyaabaha ay u baahan yihiin. Magaalada Cadaado ee xarunta Ximan iyo Xeeb ayaa waxaa maalmihii la soo dhaafay soo gaarayay wufuud kala duwan,iyadoo la filayo inuu dhawaan si rasmi ah u furmo shirka dhismaha maamul ay yeeshaan gobolada Dhexe ee Dalka.
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka Waxbarashada Dalka ayaa yiri “1dii October Wasaaradda Hiddaha iyo Tacliinta Sare ayaa Muqdisho ku qabatay kulan wadatashi ah oo lagu dhameystirayo Sharciga Tacliinta Sare ee Dalka. Kulankan ayaa Wasaaradu waxey la yeelatay Madaxda Jaamicadaha Muqdisho. Ujeedada ayaa aheyd sidii Sharciga Tacliinta Sare uu u noqon lahaa mid sare u qaada tayada waxbarashada dalka, iyadoo tallooyinka Jaamicadaha ay muhiim u tahay dhameystirka sharciga. Sharcigan ayaa noqonaya mid la jaanqaadi kara xaaladda guud isla markaana fikirka Jaamicadaha iyo tallooyinkoodaba lagu biirin doono si ay u sahlanaato dhaqangelintiisa. Wasiirka Hiddaha iyo Tacliinta Sare oo warbaahinta la hadlay kulanka wadatashiga ka dib ayaa sheegay in Sharcigan uu keenayo in la mideeyo manhajka waxbarashada dalka iyo in kor loo qaado tayada waxbarashada si ardeyda Soomaaliyeed ay u helaan waxbarsho la tartami karta waxbarashada caalamka. Dhanka kale Wasaaradda Waxbarashada ayaa usbuucan imtixaan ka qaaday macalimiin si ay dugsiyada dalka uga howlgalaan oo ilaa 200 oo ku guuleysata imtixiaanka la shaqaaleyn doono si ay uga howlgalaan 28 dugsi oo ay dowladdu dooneyso inay ka hirgeliso gobollada oo 14 ka mid ah laga hirgelin doono Gobolka Banadir. Sidoo kale usbuucan 26 ardey oo Jaamicadda Somali International University (SIU) ayaa waxey u ambabaxeen Ugandha si ay waxbarasho 1 sano ah ugu soo qaataan Jaamicadda Makerere, tanoo qeyb ka ah wadashaqeynta iyo heshiiska labada jaamicadood oo ardeyda labada dhinacba ay aqoon is weydaarsi ku sameyn doonaan labada jaamicadood si aqoontooda iyo waaya aragnimadooda kor loogu qaado.
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey wadatashiga Hiigsiga Cusub ayaa yiri “Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa 30kii September 2014 soo xiray aqoon-isweydaarsi saddexd maalmood ahaa oo Muqdisho loogu qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ee heer Gobol ilaa heer Qaran oo looga hadlayey barnaamijka Hiigsida Cusub (New Deal). Aqoon-isweydaarsigani waxaa ka soo qaybgalay 180 qof oo ka socday Maamul Goboleedyada, Maamulada Gobolada, xubno ka socday bulshadas rayidka ah iyo ka-qaybgalayaal ka socday Wasaaradaha iyo Xafiisyada Dawladda Federaalka Soomaaliya. Ujeedooyinka ugu muhiimsan ee aqoon-isweydaarsigani ayaa ahaa in faham iyo aragti midaysan laga qaato barnaamijka Hiigsiga Cusub, isla-markaana wadatashi lala yeesho dhammaan qaybaha waddanka oo dhan. Ka-qaybgalayaasha ayaa isla oggolaaday in loo baahan yahay in barnaamijkan loo dhaadhiciyo gobolada iyo degmooyinka dalka, iyagoo ku baaqay in Dawladda Federaalka ee Soomalaiya isku xidho qorshayaasha qaranka iyo kuwa maamulada gobolada. Waxaa kale oo la soo jeediyey in dadka Soomaaliyeed la gaarsiiyo muhiimadda uu xanbaarsan yahay Hiigsiga Cusub iyo in Dawladda Soomaaliya ay arrinta isu-duwidda deeqaha kala shaqayso Maamul Goboleedyada jira iyo Maamulada Gobolada. Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in kulankan uu muujinayo in barnaamijkan uu yahay mid ay dadku wada leeyihiin, loona baahan in loo hawlgalo sidii loo hirgelin lahaa, iyadoo la abuurayo halbeegyo hufnaan iyo isla-xisaabtan ku dhisan. Dowladda Federaalku wey ka go’an tahay in barnaamijkan la wada gaarsiiyo dhammaan gobollada dalka oo dhan.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey Arrimaha Abaaraha ayaa yiri “Guddiga heer wasiir ee Arrimaha Abaaraha ayaa in muddo ahba waday dadaalo gar-gaar bani’aadnimo lagu gaarsiinayo dadka tabaaleysan, iyagoo booqday deegaanada qaarkood. 30kii September 2014 Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Mudane Cabdullahi Godah Barre ayaa deeq ka timid dowladda Turkiga ka guddoomay Mas’uuliyinta Hay’adda Bisha Cas ee Turkiga oo loogu talagalay in loogu gurmado shacabka ay abaaruhu saameeyeen. Deeqdan raashinka oo gaaraya toban kun Mitrik ton oo isagu jiray bur, bariis iyo baasto oo hay’adda bisha cas ee Turkiga ugu talagashay inay kaga qeyb qaadato u gurmashada dadka ay abaartu ku saameysay ayay ku wareejiyeen Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka. Mustaf Yilmaz oo ah Madaxa wafdiga hay’adda bisha cas ee Turkiga ayaa sheegay in deeqdan ay qeyb ka tahay qorshaha hay’addu ku dooneyso inay ku caawiso bulshada Soomaaliyeed, isagoo xusay in tani ay ka turjumeyso xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga. Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ayaa sheegay in ay mucaawanadan ku soo beegantay xilli loo baahnaa oo sida ugu dhaqsiyaha badan kaalmadan raashinka ah lagu gaarsiin doono gobollada dalka ee ay ka jirto abaaraha.
Wasiirka Warfaafinta ayaa ugu danbeyntii Hambalyada Ciidul Adhxa ka hadlay oo yiri “Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Mudane Xasan Sheikh Maxamud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa iyagana gudanaya waajibaadka Xajka, oo shacabka Soomaaliyeed halkaas uga
soo duceynaya. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waxaan leeyahay Ciid wanaagsan, oo aan farxad iyo reynreyn ku wada ciidno.
Ciidul Adhxa waa ciid aad u barakeysan, oo aan dhammaan Muslimiinta gudaneysa Xajka uga baryeynaa in EEBBE Xajkooda iyo ducadoodaba u aqbalo. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan u rajeyneynaa fadhliga Ciidul Adhxa inay ku midoobaan danta guud ee shacabka. Munaasabadda Ciidul Adhxa anigoo ka faa’iideysanaya waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay is taageeraan oo dadka masaakiinta laga warqabo, isla markaana caruurta aan ka wada farxino maalmaha Ciidda.”
Iraq: ISis oo soo bandhigay cajalad muuqaal ah oo ah dilka muwaadin British ah Alan Henning
Danjire Ameeriko oo dhar u qeybiyey maxaabiis Soomaali ah oo ku xiran Mombasa